भीम रावलको विशेष खुलासा, राजनीतिमा बेग्लै तरङ्ग — Imandarmedia.com
भीम रावलको विशेष खुलासा, राजनीतिमा बेग्लै तरङ्ग
काठमाडौ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्न नहुने अडान् दोहोर्याएका छन् । नेपाललाई सिध्याउन एमसीसी छिराएको भन्दै उनले यसलाई जसरी पनि रोक्नपर्ने बताएका छन् । उनलाई एमसीसीका प्रतिनिधि मण्डलले नेपालका नेताहरुका घर–घरमा पुगेर दबाब दिएको पनि चित्त बुझेको छैन् ।
एमसीसी प्रतिनिधि मण्डलले अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीलाई भेटेलगत्तै रावलले संविधान जारी हुन लाग्दा वा सरकार परिवर्तनका बेला पनि विदेशीले दबाब दिएको भन्दै अहिले त्यहीं अवस्था दोहोरिएको बताएका छन् ।
रावलले भनेका छन्, ‘हुँदाहुँदा नेपालीले नचाहेको अनुदान पनि लिनैपर्छ भनी विदेशीले नेताहरूको घर–घर पुगेर दबाब दिने, कस्तो विडम्बना ! हे आमा नेपाल, नेताहरूलाई स्वाधीनता, स्वाभिमान र मर्यादाको सदबुद्धि देऊ ! रावल एमसीसी परियोजना कुनै हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा शुरुदेखि नै छन्।
।यसै गरि , आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सहजै संचालन हुने संभावना देखिदैन्। दिउसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको संसद बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध गर्ने तयारीमा देखिन्छ। एमालेको विरोधका कारण बुधबार तीनपटक सम्म संचालन हुन नसकेर सभामुखले बैठक आजका लागि बोलाएका छन्।
३२ साउनमा हतारहतार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले १ भदौमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्याले दल फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी आध्यादेश ल्याएको थियो।एमालेले त्यही दिन माधवकुमार नेपालसहित नयाँ दल गठनको पक्षमा रहेका १४ जनालाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठायो ।
तर सभामुखले त्यसबारे कुनै निर्णय लिएनन्। २ भदौमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको नेपाल समूहले ९ भदौमा मान्यता पायो। त्यसपछि बल्ल सभामुखले एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने भनेर निर्णय सुनाए।
तस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस सहयोगी गोविन्द परियारले जानकारी दिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी छन्। सुरक्षा परिषद् बैठकमा सुरक्षा अंगका चारवटै प्रमुख सहभागी छन्।
यसै गरि , नेपाल सरकारले भारतलाई तुइन घटना र हेलिकोप्टर प्रकरणका विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएपछि भारतीय जनता पार्टी भाजपा का राष्ट्रिय महासचिव राम माधव काठमाडौंमा आएका छन् । उनको भेटघाटको कार्यतालिका भने सार्वजनिक गरिएको छैन। उनी यसअघि २०७५ साल साउनमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।
त्यस समय उनले दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो। उनले भनेका थिए, “नेपालले सामुद्रिक मार्गको सहज पहुँच र त्यसबाट धेरै फाइदा लिनका लागि ‘दक्षिण हेर्ने’ नीति अपनाउनुपर्छ। इन्डिया थिंक ट्यांक फाउन्डेसनका निर्देशक तथा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका माधवको यस पटकको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।